यि पहिलो अक्षरबाट सुरु हुने सासुहरुले बुहारीलाई निकै माया गर्छन् – osnepal tv
यि पहिलो अक्षरबाट सुरु हुने सासुहरुले बुहारीलाई निकै माया गर्छन्
काठमाडौं । कतिपय समाजमा सासुले बुहारीलाई र बुहारीले सासुलाई हेप्ने गरेको पाईन्छ । तर पनि कमै मात्रै सासुको माया बुहारीहरुले पाईरहेका हुन्छन् । सासुले कहिले पनि आफ्नो आमाको जस्तो माया दिन सक्दैन भन्ने कुरामा आजको यो समाज अडेको छ ।
तर एक शास्त्रका अनुसार यी पहिलो अक्षरबाट सुरु हुने महिलाहरुले आफ्नो बुहारीलाई निकै माया गर्छन् । जसको बारेमा आज बताउन गईरहेका छौ ।डिु बाट नाम सुरु भएकी सासुहरुले आफ्नो बुहारीलाई बुहारी नभई मिल्ने साथीको रुपमा लिने गर्दछन् । यी नाम बाट सुरु भएका महिलाहरुले बुहारीसँग राम्रो सम्बन्ध राख्ने गरेका पाईन्छ । टिु बाट नाम सुरु हुने माहिलाहरुले पनि आफ्नो बुहारीलाई एकदमै माया गर्ने गर्दछन् ।
यो नाम बाट सुरु भएको महिलाहरुको स्वभाब निकै सान्त हुने भएकाले गर्दा झगडा गर्ने कुरालाई त्यती चासो दिदैनन् । जसले गर्दा सासु र बुहारी बिच कहिले पनि झगडा पर्दैन् ।त्यस्तै एु र जेु बाट नाम सुरु भएको सासुहरुले पनि आफ्नो बुहारीलाई निकै माया गर्ने गर्दछन् । यो नामबाट सुरु भएको महिलाहरुले बुहारीको जीवनमा कुनै पनि किसिमको आँच आउन दिदैन्, जसको कारणले गर्दा सासु र बुहारी बिच कहिले पनि झगडा पर्दैन् ।
Previous article तिब्बत स्वायत्त क्षेत्रको भ्रमण गरी परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवाली स्वदेश फिर्ता
Next article घर भित्र किन जुत्ता लगाउन हुदैन् ? यस्ता छन् कारण….
तिब्बत स्वायत्त क्षेत्रको भ्रमण गरी परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवाली स्वदेश फिर्ता
घर भित्र किन जुत्ता लगाउन हुदैन् ? यस्ता छन् कारण….